Apple yaizoendesa kugadzirwa kwe iPhone kuPegatron kudzivirira China blockade | IPhone nhau
Muvhuro wapfuura, Qualcomm yakawana kukunda kwakakosha kunopesana neApple maererano nehondo yepamutemo yakatarisana nemakambani ese uye kuti kana ikaenderera munzira iyoyo, unogona kukuvadza zvikuru mapato ese ari maviri. Parizvino, Apple yakatoona kuti dare reChinese rakarambidza sei Apple kutengesa kubva ku iPhone 6s kuenda ku iPhone X ku China.
Kuyedza kudzivisa iri dambudziko hombe kuApple, iyo Cupertino-based kambani inotarisira fambisa kugadzirwa kubva ku iPhone kuenda kuPegatron, kuitira kuti Foxconn irege kugadzira mamodheru ayo arikutengeswa munharaunda yeAsia. Sekureva kwaQualcomm pachayo, maPhones akagadzirwa naFoxconn neWistron anotyora kodzero dzekambani iyi, chimwe chinhu chisingaitike neicho chakagadzirwa naPegatron.
Chaizvoizvo, zvave chaizvo Qualcomm uyo akasimbisa kuti iPhones inogadzirwa naPegatron haikanganisa patent iyo iyo American microchip kambani yakamhan'arira Apple. Pakutanga, Apple inoita kunge ichiona zvichikwanisika kufambisa kugadzirwa kweiyo iPhone kunzvimbo dzePegatron. Dambudziko rinogona kuiswa neichi chinowanikwa mukushomeka kwetemu dzemusika pamusika, nekuti Pegatron haina simba rekugadzira rakaenzana nehofori Foxconn.
Sekureva kwenhau yeNikkei, yega yega iPhone inogadzira ine yavo yega patent rezinesi neQualcomm, rezinesi iro rinotauriranwa rakazvimirira. Sezviri pachena, chibvumirano cheQualcomm patent nePegatron chinofukidza zvimwe zvezvigadzirwa zvechigadzirwa pane izvo zvakasainwa naFoxconn naWistron.
Nikkei anofungidzira kuti kurasikirwa kwemari yeApple kubva pakurambidzwa uku kunogona simuka kusvika kumadhora mashanu emadhora kune yasara ye5.000, sekureba kwazvinotanga kushanda, sezvo iyo Cupertino-based kambani yakakwidza mutongo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Noticias » Apple yaizoendesa kugadzirwa kwe iPhone kuPegatron kudarika China blockade